August 17, 2019 - ThutaStar
ဖခင်အရင်းဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင် အပျိုဖော်ဝင်စ သမီးအရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
August 17, 2019 Thuta Star 0
သားသမီး ဆိုတာ ကိုယ့်ရတနာ၊ ကိုယ့်မျိုးဆက်၊ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လို့ ဖခင်တိုင်းက ခံယူထားကြတယ်။ ဖခင်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီးတွေအပေါ်မှာ သူများတွေရဲ့ ရန်ပြုမှာကို ကာကွယ်ရမယ်၊ မြေတောင်မြှောက် ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိက ဖခင် ၁၀ ဦးမှာ ၉ ဦးက တွေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်က […]
လူအား ငွေအားတင်မကဘဲ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်ရင်း အသက်ပါပေးခဲ့တဲ့ ဦးထွန်းမြင့်ရဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်များ
နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးလှူသွားသောဗိုလ်ကြီး ကျော်ရဲဝင်း DSA- 50 အပါအဝင်​ ကျဆုံးစစ်​သည်​များ၏ ဈာပန 😞 ၁၇.၈.၂၀၁၉၊RIP😢😢😢ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ကြပါစေ🙏🙏🙏🙏 ဖြစ်စဉ်သတင်းTNLAနှင့်မဟာမိတ်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး အပါအ၀င် စစ်သည်၊ ရဲ နှင့်အရပ်သား ၁၄ ဦးသေဆုံး ၊ ရဲ ၄ ဦး ပျောက်ဆုံးနေပြင်ဦးလွင်နှင့် နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် […]
မိသားစုတွေ ဘဝတွေ လောင်းကြေးထပ် နှလုံးသားတွေချခင်းခဲ့ရပြန်တယ်…
မိသားစုတွေ ဘဝတွေ လောင်းကြေးထပ် နှလုံးသားတွေချခင်းခဲ့ရပြန်တယ် ချစ်သူလက်မောင်းကိုရှိတ် မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲနေချိန်တုန်းက သူတို့အပြုံးတွေကြည်လင်လို့ဘယ်လောက်ပျော်နေလိမ့်မလဲ ချစ်သူနဲ့ခွဲရှေ့တန်းသွားတဲ့အချိန်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတို့ရင်ထဲဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပူရှာခဲ့မလဲ ချစ်သူကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်စွန့်ခဲ့ပြီ ဗိုက်ထဲကလူမမယ်ကလေးလေး လူ့လောကမရောက်ခင်ထဲက ဖခင်မဲ့ရပြီ သူတို့အတွက်လည်း ကောင်းကင်ပြိုခဲ့ပြီ သူတို့ငိုနေမလား စိတ်နာနေမလား ရင်ကွဲပက်လက်ခံစားနေရမလား သူတို့ရင်ဘက်ထဲဝင်မခံစားရဲဘူး ပါရမီဖြည့်ဖက်မို့ဂုဏ်ယူလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားသံ သူတို့ခံနိုင်ရည်ရှိပါ့မလား မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မိသားစုတွေ ဘဝတွေ […]
အရပ်ဘက်ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်သည့် မြောက်ပိုင်း သုံးဖွဲ့လုပ်ရပ်ကို အကြမ်းဖက်မှုဟု အစိုးရသတ်မှတ်
အရပ်ဘက်ပစ် မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် တအာင်းအဖွဲ့ (TNLA)၊ ရခိုင်အဖွဲ့ (AA)နှင့် ကိုးကန့်အဖွဲ့ (MNDAA)တို့၏ လုပ်ရပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြီးမားစွာထိခိုက်စေသည့် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြော ကြားသည်။ ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ […]
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ငွေကြေးအညံ့များ အဆင်ပြေလာစေသော ယတြာ
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ငွေကြေးအညံ့များ အဆင်ပြေလာစေသော ယတြာ ငွေအကြွေး ပြေလည်လာစေတာထက် လက်ရှိမှာ ငွေလည်ပတ်မှု များလာပြီး အဆင်ပြေလာတယ် အကြပ်အတည်းတွေလည်း အဆင်ပြေလာတယ် ငွေရဲ့ပေါများမှု ဖြစ်လာမှ တော့ အကြွေးဆိုသည့် ငွေပြေလည်မှု ရရှိလာတယ် ။ ဘယ်သို့သော နေ့ရက်သားဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရပေသည် ။ ဆန်ကိုမောက်မောက် […]
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ “ဂုတ်တွင်းတံတားကို ရှောင်ကွင်းသွားလာနိုင်တဲ့ လမ်းများကို ထုတ်ပြန်ပေး
“ဂုတ်တွင်းတံတားကို ရှောင်ကွင်းသွားလာနိုင်တဲ့ လမ်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့လို့ ခေါ်တဲ့ ( AA + TNLA + MNDAA ) မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့ ဂုတ်တွင်းတံတားကို လက်ရှိမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းပြီး သြဂုတ်လ ၂၀ […]
လားရှိုးမြို့တွင် ဈေးသည်များ အထိတ်တလန့်ဖြစ် ဈေးဆိုင်များပိတ်သိမ်းနေ
လားရှိုးမြို့တွင် ဈေးသည်များ အထိတ်တလန့်ဖြစ် ဈေးဆိုင်များပိတ်သိမ်းနေ လားရှိုးမြို့နဲ့ ၁၂ မိုင်ခန့်အကွာ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီးတွင် သောင်းကျန်းသူများမှ တိမ်ဖြူ ပန့်ဆီဆိုင်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ် မီးရှို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင်း ဈေးဆိုင်အချို့နှင့်မြို့မဈေးကြီးအတွင်းရှိဈေးဆိုင်များ၊ ဈေးရောင်းချနေသူများအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်များပိတ်သိမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာ ပြည်သူတွေနေရတာ အထိတ်တလန့်နဲ့ ရင်တမမ ပါပဲ…. နိုင်ငံကို အကျိုးမပြုပဲ ပြည်သူတွေကို အမြဲတမ်းဒုက်ခပေးနေတဲ့ […]
လားရိူးလူငယ် လူမူ့ကူညီရေးအသင်း ခေါင်းဆောင် လူနာကယ်ရင်း အပစ်ခံရပြီး သေဆုးံ
လားရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ၁၂မိုင်​တွင်​ဖြစ်​ပွား​နေ​သောတိုက်​ပွဲအတွင်းဒဏ်​ရာရလူနာများသွား​ရောက်​သယ်​​ဆောင်​စဉ်​တဖက်​မှလက်​နက်​ကြီးများဖြင့်​ပစ်​ခက်​ရာ​လော​လောဆယ်​တွင်​အကျိုး​ဆောင်​လူငယ်​အသင်းမှအသင်းဥက္ကဌဦးထွန်းမြင့် အပါအဝင် အသင်းသား၎ဦးဒဏ်​ရာရရှိပြီးဆက်​သွယ်​မှုပြတ်​​တောက်​​နေကြောင်း သိရပါသည်။ လားရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ၁၂မိုင်​တွင်​ဖြစ်​ပွား​နေ​သောတိုက်​ပွဲအတွင်းဒဏ်​ရာရလူနာများသွား​ရောက်​သယ်​​ဆောင်​စဉ်​တဖက်​မှလက်​နက်​ကြီးများဖြင့်​ပစ်​ခက်​ရာ​လော​လောဆယ်​တွင်​အကျိုး​ဆောင်​လူငယ်​အသင်းမှအသင်းဥက္ကဌဦးထွန်းမြင့် အပါအဝင် အသင်းသား၎ဦးဒဏ်​ရာရရှိပြီးဆက်​သွယ်​မှုပြတ်​​တောက်​​နေကြောင်း သိရပါသည်။ လားရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ၁၂မိုင်​တွင်​ဖြစ်​ပွား​နေ​သောတိုက်​ပွဲအတွင်းဒဏ်​ရာရလူနာများသွား​ရောက်​သယ်​​ဆောင်​စဉ်​တဖက်​မှလက်​နက်​ကြီးများဖြင့်​ပစ်​ခက်​ရာ​လော​လောဆယ်​တွင်​အကျိုး​ဆောင်​လူငယ်​အသင်းမှအသင်းဥက္ကဌဦးထွန်းမြင့် အပါအဝင် အသင်းသား၎ဦးဒဏ်​ရာရရှိပြီးဆက်​သွယ်​မှုပြတ်​​တောက်​​နေကြောင်း သိရပါသည်။
မဟုတ်တာ လုပ်ထားတဲ့သူတွေ ကြောက်တဲ့ X-Ray စက်ကြီးဆိုတာ ….
မဟုတ်တာ လုပ်ထားတဲ့သူတွေ ကြောက်တဲ့ X-Ray စက်ကြီးဆိုတာ…. NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နည်းပညာမြင့် X-Ray စစ်ဆေးရေး ယာဉ် အမေရိကန်က တစ်စီး. ရုရှားက..တစ်စီး ရရှိထားတယ်.. ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၅ သန်းဖိုးလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပြင်ဦးလွင်အထွက် နောက်ချိုဂိတ်မှာ.. ပထမဆုံးစမ်းသပ်တဲ့..ရက် ၂၀၁၉ […]